फ्राइडे रिलिज : प्रेम दिवससँग भिड्दै झट्का - VOICE OF NEPAL
३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १०:०८ 205 ??? ???????
काठमाडौं – आज शुक्रबारबाट दुई नयाँ फिल्म एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । फिल्म हुन् ‘प्रेम दिवस’ र ‘झट्का’ । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यी दुबै फिल्म देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । विना प्रचार प्रदर्शनमा आएका यी दुबै फिल्मका विषयवस्तु र कलाकार भने भिन्न रहेका छन् ।
‘रियल कपल’ प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको को मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘प्रेम दिवस’ त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा निर्माण भएको हो । योगेश घिमिरेले निर्देशन गरेको फिल्मबाट विशाल खरेलले अभिनयमा डेब्यू गरेका छन् । प्रदीप भारद्वाजको लेखन, सञ्जय न्यौपानेको निर्माणरहेको फिल्मले सिंगल थियटर र मल्टिप्लेक्सका थौरै हल पाएको छ ।
रमेश बिसुङ्खको निर्देशन रहेको ‘झट्का’ उनकै कथामा निर्माण भएको फिल्म हो । काठमाडौँको रात्री जीवनको कथा विषयको रुपमा उठाएको फिल्ममा सुरविर पण्डित, श्याम लाल श्रेष्ठ, रक्षा गुरागाइँ, ईश्वर गुरुङ, मनिता श्रेष्ठलगायतको अभिनय छ । फिल्ममा सुरविरको गेटअप निकै फरक छ । यसमा उनले नेगेटिभ रोल निभाएका छन् । जीवन पराजुलीले छायाँकन फिल्मको निर्माता तुलसीलाल नेवा हुन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्यो एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण
‘छ माया छपक्कै’को चार दिनको कलेक्सन पाँच करोड!
सरकारले बोलायो निजामती कर्मचारीलाई सीको स्वागत गर्न माइतीघरमा !
यस्ता देखिए ‘सूर्यवंशी’को क्लाइमेक्समा अक्षयसँग अजय र रणवीर पनि !
“षड्यन्त्रहरुबाट हामी बिचलित भएका छैनौं”-दीपकराज गिरी